Wasiirka Cusub Ee Khaarajiga Somaliland Oo Si Weyn Loogu soo dhaweeyay Hargeysa | Somaliland.Org
Wasiirka Cusub Ee Khaarajiga Somaliland Oo Si Weyn Loogu soo dhaweeyay Hargeysa
July 21, 2013	Hargeysa (Somaliland.Org) – Wasiirka cusub ee Wasaarada Arrimaha Dibedda iyo Iskaashiga Caalamiga ah ee Jamhuuriyada Somaliland Md. Maxamed Biixi Yoonis, ayaa mucaaridka iyo muxaafidka ugu baaqay in loo midoobo qadiyada madaxbannaanida Somaliland iyo horumarka dalka, isla markaana la noqdo ummad isku duuban.
Md. Maxamed Biixi Yoonis oo madaarka caalamiga ah ee Cigaal ee magaalada Hargeysa ka soo degay maanta, ayaa hadal kooban oo uu saxaafadda u jeediyey ku sheegay in Somaliland leedahay, isla markaana buuxisay dhammanba astaamaha dawladnimo looga baahan yahay.
“Muxaafid iyo mucaaridba marka ay noqoto qadiyada Jamhuuriyada Somaliland, ictiraafkeeda, horumarkeeda, nabadeeda, dhaqaalaheeda in aynu u sinaano oo meel uga soo wada jeedno oo aynu ahaano ummad isku duuban oo caalamku arko in aynu nahay ummad jirta, runtana iskama indho tiri karaan. Dhul baynu leenahay, shacbi baynu leenahay, caalamka ayeynu la macaamilnaa, wixi dawladi lahaan jirtay oo dhana waynu leenahay. Dawlado fara badan oo Afrika ku yaal ayeynu maanta ka magac weynahay, kuwaasoo maalin kasta inqilaaf ka dhaco ama dhibaato kale ka dhacdo,” ayuu yidhi Md. Maxamed Biixi Yoonis.
Wasiirka cusub ee Arrimaha dibadda Somaliland waxa uu is barbar dhig ku sameeyey dalalkii caalamka ee uu hore uga soo shaqeeyey iyo Somaliland, waxaannu yidhi; “Annigu waxaan ka shaqaynayey hawlaha nabad ilaalinta, waxaan ka imin gobolka Daarfuur ee dalka Suundaan, ninka labaad ee ugu weyn (darajada sareeya) ayaan ahaa. Waxaan ahaan ninka dhisay Darfuur oo dhan. Waxaan ku faraxsanahay anigoo Darfuur ka shaqeeyey oo Jerusalem (Qudus) oo Israa’iil ah, waxaan ahaa nin ka soo shaqeeya Qassa oo Falastiin ah, dhulkaas aan ka soo shaqeeyey waa dhul wada colaad ah, (Laakiin) Somaliland way degan tahay oo aanay nabad ilaalin u baahnayn. Waxaynu nahay maanta ummad degan oo dedaadalaysa oo wada shaqaysanaysa. Waxaanan ku dedaalayaa in aan ka soo baxo xilkaas culus ee la ii igmaday, idinkuna iigu soo duceeya.”
Wasiirka cusub ee Arrimaha Dibadda waxa uu tilmaamay in xil aad u culus loo magacaabay, isagoo dadweynaha ka codsaday inay ugu duceeyaan in Ilaahay xilkaas u fududeeyo, waxaannu yidhi; “Hawl culus baa la ii igmaday oo ah in aan noqdo ummadda wasiirkeeda khaarajiga, waxaan Ilaahay ka baryayaa, idinkana idinka codsanayaa inaad iigu ducaysaan in xilkaas culus Ilaahay ii fududeeyo oo Ilaahay hawshaas ila qabto. Hawshaasina waa mid ummadda oo dhan ka dhexaysa. Waa hawl u baahan in aynu ka sinaano, ka midaysnaano, meel uga soo wada jeedsano.”
Wasiirka cusub ee khaarajiga oo diyaarad khaas ahi shalay soo qaaday magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya, waxa madaarka Hargeysa ku si diiran ugu soo dhaweeyey, maayirka caasimada Hargeysa, Guddoomiyeyaasha xisbiyada KULMIYE iyo UCID, Xoghayaha Guud ee Xisbiga WADDANI, wasiirro ka tirsan xukuumada, mudanayaal ka socday baarlamaanka (guurtida iyo wakiillada), Xoghayaha gaarka ah ee madaxweynaha Somaliland, Badhasaabka Gobolka Togdheer Md. Axmed Xaaji Cumar Cabdillaahi (Xamarje), madaxdhaqameed, culimo-awdiin iyo dadadweyne buux dhaafiyey garoonka diyaaradaha, hawshaasoo ay ka shaqeeyeen guddida qabanqabaada soo dhawaynta wasiirka cusub ee Arrimaha Dibadda Somaliland, iyadoo gaadiid kala duwan oo aad u badan loogu galbiyey dhinaca hudheelka Maansoor oo wasiirka la dejiyey.
Md. Maxamed Biixi Yoonis, waxa uu si diiran ugu mahadceliyey dadweynaha kala duwan ee u soo baxay soo dhawayntiisa, isagoo arrintaas ka hadlayeyna waxa uu yidhi;“Marka Ugu horaysa gabi ahaantiin waan idin salaamayaa, saxaafadda, shacbiga reer Somaliland, madaxweynaha Somaliland, golihiisa wasiirrada, golaha baarlamaanka (guurtida iyo wakiillada), madaxdhaqameedka, bulshada oo dhan ku yar iyo ku weyn, rag iyo dumar aad iyo aad baan idiin salaamayaa.
Waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa dadka faraha badan ee maanta (shalay) halkan isugu yimi si ay iigu soo dhaweeyaan iyadoo ay ramadaan tahay oo la sooman yahay oo ay tahay bil barakaysan. Aad baanay soo dhawayntiinu ii taabatay in aan dalkaygii hooyo ku soo noqdo, si fiicana la iigu soo dhaweeyo.”
Wasiirka cusub ee arrimaha dibedda oo la weydiiyey inuu sharaxo shaqadii uu ka hayey Darfuur iyo Qarammada Midoobay, waxa uu yidhi; “Waxaan kaaliyaha Xoghayaha Guud ee Qarammada Midoobay, waxa I magacabay Ban Ki-moon (Xoghayaha Guud ee Qarammada Midoobay) iyo Jean Ping (Guddoomiyihii Midawga Afrika), waxaan Gobolka Darfur wakiil uga ahaa Qarammada Midoobay iyo Midawga Afrika, markii madaxweynuhu i weydiiyey in aan wadanka imaadana waxaan madaxdaydii u sheegay in aan xilka ka tagayo oo aan dalkayga ka shaqaynayo.”
Wasiirka cusub ee Arrimaha Dibedda iyo Iskaashiga caalamiga ah ee Somaliland oo soo dhawayntiisa si weyn looga dareemay caasimada Hargeysa shalay, waxa xilka loo magacaabay 26 June 2013. Waa khabiir 66 sanno jir oo qiyaastii muddo 23 sanno ah ka shaqaynayey hawlaha Qarammada Midoobay ka wado bariga dhexe iyo Afrika, gaar ahaan gobolka Darfuur ee dalka Suudaan oo uu ka waday shaqadiisii u dambaysay ee UN-ka. Waxa masuulkani Jaamacadda Harvord ee dalka Maraykanka ka bartay culuumta siyaasadda, xidhiidhka caalamiga ah, maamulista arrimaha bulshadda iyo cilmiga maamulida dhaqaalaha. Waa waayo-rag aqoonyahan ah oo la soo shaqeeyey Xoghayaha Guud ee Qarammadda Midoobay.
Previous Post“Toddoba qodob waxay na tuseen wejiga runta ah ee Xukuumadda Madaxweyne Siilaanyo”Next PostGuddoomiyaha UCID Oo Isku tilmaamay Basaas Firxad ah	Blog